Fiovaovan’ny toetr’andro Nahatratra 253 ireo olona efa novonjena teny an-dalambe
Maroantsetra Zazavavy 16 taona, hita faty niantona
Zazavavy kely iray vao 16 taona monja, mpianatry ny CEG Ambodiaramy no hita faty niantona teny ambony hazo ny sabotsy teo tao Ambodiaramy ihany. Efa tsy nisy fofon’aina intsony ny anaovavy vao nisy nahita ny vatana mangatsiakany.
Mpiasan’ny « zone » ao Antsirabe In-droa nahita ny maizina, miantso vonjy
Diso fanantenana indray ireo mpiasan’ny orinasa afakaba iray ao Antsirabe omaly maraina raha niverina tany amin’ny toeram-piasany satria tapitra ny fe-potoana nolazaina azy ireo fa handehanan’izy ireo
CNaPS - DGI Napetraka ny rafitra E-salariés
12%n` ireo orinasa eto Madagasikara ihany no manao filazana karama sy fanambarana ny mpiasa ara-dalàna eo anivon` ny CNaPS.
Faritra Androy Herintaona tsy nisy rotsak'orana
Rivotra sy hain'andro no iainan’ny mponina any amin’ny Faritra Androy. Herintaona tsy nisy rotsak'orana tamin’iny faritra iny.
Fizarana fanampiana eto Analamanga Adino i Manjakandriana , Andramasina, Ankazobe…
Manaitra ny fanjakana ireo mponina ao anatin’ireo distrika sasany ato anatin’ny Faritra Analamanga eo anatrehan’ny fizarana fanampiana sy tohana avy amin’ny fanjakana.
Toamasina Mafotaka ny fanalana mpivarotra amoron-dàlana
Nesorin'ny avy eo anivon'ny fiadidiana ny tanànan’i Toamasina avokoa omaly ireo tsena rehetra voalaza fa tsy manara-dalàna manodidina ny Bazary kely.
Fampidinana vidin-tsolika Mahita ialana bala foana ny fanjakana
Tany amin’ny fiandohan’ny krizy no efa nanomboka nitotongana ny vidin’ny solika teo amin’ny tsena iraisam-pirenena.
Betsaka ireo karazana tranga miseho eto amintsika vokatry ny fiovaovan’ny toetr’andro.
Vao tamin’ny alahady lasa teo dia olona efatra no indray maty an-drano nalain’ny sampana mpamonjy voina etsy Tsaralalana vokatry ny hafanana diso tafahoatra. Olona namonjy renirano avokoa izy ireo. Ekena, hoy ny Kapiteny Razandrabe Parfait Mamy, tompon’andraikitra voalohany ao Tsaralalana fa mila mandro matetika ny olona mba hampangatsiaka ny vatany saingy mila mitandrina kosa amin’ireo rano mandeha. Misy amin’izy ireny mantsy no misy lava-biriky izay marihina fa mahafaty haingana tokoa. Ankoatra izay dia olona manodidina 253 isa no nanaovan’izy ireo asam-pamonjena teny an-dalana nanomboka ny volana janoary lasa teo izay mbola vokatry ny hafanana diso tafahoatra ihany. Misy amin’ireny karazan’olona ireny no torana fa tsy mahazaka raha misy koa ireo narary avy hatrany. Nomarihin’ny teo anivon’ny sampana mpamonjy voina moa fa miezaka mamono afo amin’ireo doro tanety mitranga ihany koa izy ireo hahafahana miady amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro. Efa miparitaka manerana ny faritra maro mantsy ny doro tanety ankehitriny na dia ny manodidina an’Antananarivo aza.